September 4, 2021 Xuseen 4
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin Madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/XKQ/222/1-711/092021 uu kaga Aqbalay Is-casilaadii uu hore u soo gudbiyey Baashe Cawil Cumar, kuna Magacaabay bedelkiisa.
Ku: Baashe Cawil Cumar
Waxa i soo gaadhay qoraalkaaga ku taariikhaysan 02/09/2021, ujeeddadiisuna tahay is-casilaadda xilkii laguu magacaabay ee Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah. Sidaa darteed, waxa aan kula socod-siinayaa in aan kaa aqbalay is-casilaaddaa laga bilaabo taariikhda maanta. Waxaan kaaga mahad-celinayaa muddadii aad haysay xilka iyo hawlihii aad u qabatay Qaranka.
MarkaanArkay: Qodobka 90aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;
In Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland
Waar reer ABAARSOOW masaajidka ka daaya ciyaarta!
Aniga oo aad iwada taqaannaan in aan ahay MADAXWEYNAHA mandaqadda barakaysan ee SSC, bal ka warrama haddaad hadda warqado A4-ah ku soo xarxarriiqo waxa golahayga wasaaradaha ka mid ah wasaaradda ARRIMAHA DIBEDDA & DIFAACA, saw riwaayad dadkayga u jilimaayo? Dee jawaabtu waa HAA, waayo labadaa wasaaradoodba waxaa yeelan kara, haddii aan ruwaayad la jilayn, jamhuuriyadda Soomaaliya, ee maamul-BEELEED ma yeelan karo.
Waxa kale oo iyana ruwaayaddaa mid u eg ayaamahan jilayey maamul-beeleedka Garoowe; qof & cod baan qabsanaynaa!!! Waar maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa, futadiinaaaba BUUHOODLE ka muuqata e. Meel oday NIIKINAAYA uu horjooge u yahay bal qiyaasa?! BEYDAANKAA BEYDAANKAA, waar alle yaagaranaya. Waxa aan mali jiray, “haddaadan xishoonayn waxa aad rabto samee.” Waar waddankii GARANLEY baa wada qabsatay.
Gunaanadki, reer ABAARSOOW Goroyo haad noqon weyday ee masaajidka ciyaarta ka daaya. Mardanbana waxan oo kale haku soo qorina baraha bulshada waad naga xanaajinasaane. Waa MADAXWEYNAHA ismaamulka SSC ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo aad uga xanaaqay ficillada ciyaalnimada ah ee shicibka lagu marin habaabinayo.
Mahad Cabdillaahi says:
Illaahay baan ku dhaartee kan jilaya Ruwaayad waa diga iyo dhalanteedka Xaarmaajo ee fadhiidka ah ee xukuma kooxda Mafiyada Fahad Yaasiin iyo Jiis Mareexaan, oo dhowaan lasoo afjari doono, lana marsiin doono meeshii Ła marsiiyey kuwii wax isbaday ee ka wazweynaa, biyo isiiya baa xigi doonta, waligaa khiyaaligaa ku jir. Adduunka maanta runta ayaa ka shaqaysa, xaalkiisu waa Ashraq Qani iyo Abiya Ahmed, taayadu waa Tigree iyo Talebaan, runta waxa u hadhaya ninka dhulka leh, ee mintidka ah, midnimo iyo sangadhuudhi waa dhammaatay SSC wax la yidhaa ma jirto waa Somaliland, shakers and movers of Dhulbahante they made their mind,
SSC xaggee ku taal?
Somaliland guul,waa guul ,waa guuul .
Guddiga amniga Qaranka ee garabka madaxweyne Farmajo oo soo bandhigaya xogta Ikraan Tahliil. by Xuseen | posted on September 18, 2021
Ra’iisul Wasaare Rooble oo shir guddoomiyey kulan xasaasi ah oo ka qabsoomay Muqdisho. by Xuseen | posted on September 18, 2021